Korea Atsimo: Miala Amin’ny Asany Ireo Mpanao Gazety Maro Avy Amin’ny Fahitalavi-panjakàna Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2012 12:04 GMT
Ireo mpanao gazetin'ny iray amin'ireo tambajotram-pahitalavitra ara-barotra lehibe indrindra any Korea Atsimo, ny Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) dia mitokona mandritra ny fotoana tsy voafaritra efa nanomboka tamin'ny volana Janoary 2012, mitaky ny fahamarinana amin'ny fanaovan-gazety. Manodidina ny mpiasa 400 anaty sendika [ko] no nanomboka ity fitokonana ity, ary mihamafy izany fifamaliana izany satria miha-betsaka ireo mpanao gazety, mpanolotra fandaharana sy mpamokatra no milaza fa tsy nanao na zara raha nanao tatitra momba ireo olana politika saropady ny MBC. Tamin'ny 4 Martsa 2012, mpanao gazety 166 no nanambara fa hiala amin'ny asany [ko] ho mariky ny fanoherana.
Anisan'ireo honohono ireo ny hoe zara raha manao tatitra i MBC momba ireo fitokonana manohitra ny fifanarahana fifanakolazana malalaka natao tamin'ny Etazonia, ary nanao tsinontsinona ny fividianan-tany mampiahiahy nataon'ny filoha Lee Myung-bak ho an'ny trano fialàny sasatra. Ankoatr'izay, ny filohan'ny MBC, Kim Jae-chul dia voahendrikendrika ho manivana sy mandefa ny heviny manokana amin'ny Vaovaon'ny MBC sy ny Fandaharana Fanadihadian'ny MBC, ny PD Notebook, ka manahatonga ireo fandaharana ho tsy mahavita ny asany amin'ny maha-fanaovan-gazety.
Notantarain'ilay mpanao gazety avy amin'ny fahitalavitra MBC, Jung Woo-young (@mbcjwy) tamin'ny bitsika[ko] ny zava-niainany tamin'ny fitokonana:
Lee Oi-soo (@oisoo), mpanoratra be mpividy indrindra any Korea Atsimo sady iray amin'ireo 5 mpibitsika matanjaka indrindra any amin'ny firenena, dia nandefa bitsika [ko]:
Ny kaonty twitter an'ny sendikan'ny mpiasa ao amin'ny MBC @saveourmbc dia nanome rohy mankany amin'ny lahatsary YouTube [ko] mampiseho andiana sarin'ireo mpanao gazety mitaky ny fahamarinana amin'ny fanaovan-gazety, ary hita ao ny anaran'ireo voaroaka:
Namoaka sarin'ireo “jiolahim-boto karamain'ny orinasa” mivory ao amin'ny tranoben'ny MBC ihany koa ry zareo:
사측에서는 청경 충원이라는 입장.. RT @saveourmbc: 김재철이 부른 용역 사진 한장 더.. 공개 스튜디오에 모여서 뭔가 교육받고 있나 봅니다.. 잘만하면 백명 될듯.. twitpic.com/8s4x1v
Namoaka sary avy amin'ny fivoriana iray i Han Hak-soo (@mbcpdhan), mpamokatra fandaharana ao amin'ny MBC, izay nanoratra tamin'ny Twitter hoe, “Mitokona izahay […] Rava i MBC. Mialà Kim Jae-chul”.
Mpandrindra sarimihetsika manodidina ny 40 no namoaka fanambaràna [ko] manohana io fitokonana io. Nirehidrehitra tamin'ny hevitra maro samihafa ny tontolon'ny Twitter Koreana, ny ankabeazan'izany dia hafatra maneho firaisan-kina sy fanohanana avokoa.
Song Yo-hoon (@syh24) dia nibitsika hoe [ko]:
@imdramafan dia nbitsika hoe [ko]:
Rehefa nanontaniana izy tamin'ny fanadihadiana iray raha mieritreritra ny hiala ho mariky ny fandraisana andraikiny amin'izao tranga izao, dia namaly Kim Jae-chul [ko] fa tsy hiala izy raha tsy efa “mandry anaty vatapaty.”
2 ora izayMyanmar (Birmania)
Soratra miverina: Korea Atsimo: Mitokona Ny Toby TV Telo Lehibe Indrindra Indrindra Hisian’ny Fanaovan-gazety Tsy Mitongilana · Global Voices teny Malagasy
[…] manazava ny fomba fampitongilanana ny vaovao ataon'ny lehibe hanatsarana ny governemanta (Vakio ato amin'ny Global Voices Teny malagasy ny lahatsoratra momba izany fitokonana […]
27 Marsa 2012, 21:46